Kofehy vita amin'ny lambam-paty 2 LEAF - Mili Mili
Home > Andian-ondana 2 LEAF
Andian-ondana 2 LEAF
Ny andian-ondana rongony rongony misy ny ravin'ny Moimili no soso-kevitray hanamboarana ny efitrano an'ny ankizy. Izy ireo dia mety ho fanampin'ny tranolainay na trano fandriana na seza amin'ny seza. Mampirisika anao izahay hamorona fandrafetana ondana maro. Ny loko tokony hofidina: vovoka mavokely, mavokely mavokely, marsala mahery, tantely, ranomasina, alokaloka marevaka. Azafady mba ampahafantaro anay ny fisafidianana loko ho an'ny ondana roa rehefa mandidy. Raha tsy misy ny mombamomba azy, ny ondana dia ho voafidy indroa.
Default Title - PLN 179.00 PLN